အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေဖို့ နည်းလမ်းများ
၁. မရှက်မကြောက် များများပြောပေးပါ။
မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်ထားပြီး တတ်နိုင်သလောက် လူတွေများများနဲ့ အဆင်ပြေရင်ပြေသလို စကားမျာများပြောပေးပါ။ မိမိပြောလိုက်တဲ့ စကားက မှားသွားမှာလားဆိုတာကို တွေပြီး မရှက်မိဖို့၊ မကြောက်မိဖို့လိုပါတယ်။
စကားပြောတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေ များများရလာတာနဲ့အမျှ မိမိကိုယ်မိမိ ပိုလို့ယုံကြည်မှုတိုးလာကာ အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွင်းမှာ အသံထွက်ရော၊ ဝေါဟာရပါ မှန်ကန်ကြွယ်ဝ လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတွက် အဓိက သော့ချက်က မရှက်မကြောက်ဘဲနဲ့ များများပြောပေးဖို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်း တစ်ရပ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
၂. Google Translate ကို အသုံးပြုပါ။
စကားလုံးတစ်လုံးကို အသံထွက်ဖြစ်စေ၊ ဝေါဟာရဖြစ်စေ မသေချာဖြစ်နေတဲ့အခါ google မှာ ရှာလိုက်ပါ။ မိမိသိချင်တဲ့ စာလုံးလေးကို ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ ဝေါဟာရအဓိပ္ပယ်ကို သိရသလို audio button ကို နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့လည်း မှန်ကန်တဲ့ အသံထွက်ကို လေ့လာ နားထောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်မြင်သံကြားမှာ လာတဲ့ အင်္ဂလိပ် သတင်းတိုတိုလေးတွေ၊ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေကို များများနားထောင်ပေး ခြင်းဖြင့် အသံထွက်တွေကို နားရည်ဝလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို များများနားထောင်ပေးခြင်းဖြင့် စကားလုံး အသစ်အဆန်းတွေကို လေ့လာမှတ်သားနိုင်လာကာ ပိုမို အလေ့အကျင့်ဖြစ် လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄. ကျယ်ကျယ်လေး စာဖတ်ပါ။
အင်္ဂလိပ်မဂ္ဂဇင်း၊ သတင်းစာတို့ဖတ်တဲ့အခါလည်း အသံကျယ်ကျယ်လေးနဲ့ဖတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုဖတ်ပေးခြင်းဖြင့် မိမိရဲ့အသံထွက် အနေအထား အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ ပြင်ဆင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံးစာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာလောက်ကို မဖြစ်မနေဖတ်ပေးသင့်ပါတယ်။
၅. နေ့စဉ် စကားလုံး အသစ်တစ်လုံး သင်ယူပါ။
တစ်နေ့ကို စကားလုံး တစ်လုံးလောက် ရွေးချယ်ပြီး မတူညီတဲ့ ဝါကျတွေမှာ ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ကျင့် သွားခြင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဝေါဟာရ စာလုံးလေးတွေ ပေါကြွယ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် ရှပ်ရှင်ကားတွေကို ကြည့်ပေးခြင်းဖြင့် ဝေါဟာရစာလုံးအသစ်တွေနဲ့ အသံထွက်တွေကို ကောင်းကောင်း သတိပြု မှတ်မိစေ မှာဖြစ်ပြီး စကားပြောစွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၇. နိုင်ငံခြားသား မိတ်ဆွေတွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြောဆိုပါ။
အင်္ဂလိပ် စကားပြောတဲ့သူတွေ၊ အင်္ဂလိပ် စကားပြောနိုင်ဖို့လေ့လာနေတဲ့ မိမိလို ဘဝတူတွေ နဲ့ မိတ်ဖွဲ့ပြီး ပြောဆိုလေ့ကျင့်ပေးပြီး မိမိရဲ့ အတွေ့အကြုံ နဲ့အမြင်တွေကို ဖလှယ်ပါ။
သင်ယူလေ့လာနေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့ကျင့်ပြောဆို ဆွေးနွေးပေးခြင်းဟာလည်း မိမိတို့ရဲ့ စကားပြောစွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေဖို့ အထောက်အကူပြုတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ စိတ်ဝင် စားစရာကောင်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဇာတ်လမ်း၊ ပုံပြင် အကြောင်းတွေကို ငြင်းခုံဆွေးနွေးပါ။
မိမိလိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ပြောဆိုတတ်ဖို့ တတ်နိုင်သလောက် ဝေါဟာရ စကားလုံးကို ကြွယ်ဝစွာ အသုံးပြုပေးခြင်းဟာလည်း စကားပြောစွမ်းရည် တိုးတက်စေပါတယ်။
၉. အဘိဓာန်ကို အသုံးပြုပါ။
အဘိဓာန်မှာ သန်းပေါင်းများစွာသော စကားလုံးတွေ ပါဝင်နေရာ မိမိသိချင်တဲ့ စကားလုံးတွေကို ရှာဖွေသိရှိနိုင်သလို စကားလုံးတစ်လုံးအား ဝါကျထဲမှာ အသုံးပြုထားပုံကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်တာကြောင့် အဘိဓာန်အသုံးပြုခြင်းဟာလည်း အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်စေပါတယ်။
« ဦးနှောက်အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် အစားအစာများ
English listening ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲ??? »